RCEP: Wadamada Aasiya iyo Baasifigga oo kala saxiixday heshiiskii ganacsi ee ugu weynaa Dunida. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA RCEP: Wadamada Aasiya iyo Baasifigga oo kala saxiixday heshiiskii ganacsi ee ugu...
RCEP: Wadamada Aasiya iyo Baasifigga oo kala saxiixday heshiiskii ganacsi ee ugu weynaa Dunida.
Shiinaha iyo 14 waddan oo kale ayaa isku raacay inay dhisaan ururka ugu weyn adduunka ee ganacsiga xorta ah, oo ka kooban ku dhowaad saddex meelood meel dhammaan howlaha dhaqaale, heshiis in badan oo Aasiya ka mid ah ayaa rajeynaya inuu gacan ka geysan doono soo dedejinta ka soo kabsashada dhibaatooyinka cudurka coronavirus.
Iskaashatada Dhameystiran ee Dhaqaalaha, ama RCEP, waxaa si rasmi ah loo saxiixay Axaddii Xilli uu socdo shir sannadeedka 10-ka dal ee Ururka Koonfur-Bari Aasiya (ASEAN).
“RCEP waxaa dhawaan ansixin doona wadamada saxiixay waxayna dhaqan gali doontaa, iyadoo gacan ka geysaneysa dib u soo kabashada dhaqaalaha kadib COVID,” ayuu yiri Nguyen Xuan Phuc, ra’iisul wasaaraha Vietnam, oo martigaliyay Shirka ASEAN.
RECP ayaa lagu hashiiyay in ay qaadi doonto canshuuro hoose oo ku saabsan ganacsiga u dhexeeya wadamada xubnaha ka ah waxayna gaari doontaa macaamiisha 2.2, sida ay sheegtay Vietnam.
Marka lagu daro 10ka dal ee ASEAN, heshiiska waxaa ka mid ah Shiinaha, Japan, Kuuriyada Koonfureed, Australia iyo New Zealand, laakiin kuma jiraan Mareykanka walow la sheegay in heshiiska uu albaabka u furayo Hindiya, oo u baxday sababo la xiriira diidmo xoog leh oo gudaheeda ah oo la xiriirta shuruudaha suuqa, si ay uga mid noqoto midowgan.
“Ka dib sideed sano oo aan kula xaajooneynay dhiig, dhidid iyo ilmo, waxaan ugu dambeyn soo gaarnay xilligii aan kuxiran laheyn heshiiska RCEP,” Wasiirka Ganacsiga Malaysia Mohamed Azmin Ali, ayaa ku yiri hadal uu soo saaray Shirka ka hor.
Ugu dambeyntii Xubnaha ASEAN waxaa ka mid ah Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Philippines, Thailand, Brunei, Singapore, Malaysia iyo Vietnam.
Previous article(DAAWO) Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa xarigga ka jaray dhismaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi oo dib loo dayactiray kaddib 30 sano oo ay burbursanayd+(MUUQAAL).
Next articleDowladda Itoobiyo oo sheegay in Dagaalka ay ku jirto Ciidamada TPLF ee Waqooyiga Dalkaasi Guulo isdabo jooga ah ay ka gaartay.